नेत्रहीन: फ्लाईमा हीटम्यापि | Martech Zone
आँखा क्वान्ट एक भविष्यवाणी गर्ने आँखा ट्रयाकि model मोडल हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले पृष्ठ on देखि seconds सेकेन्ड भित्र के हेर्दछन् भन्नेमा विशेष रूपमा देखिन्छ। यो विचार सरल छ: seconds सेकेन्ड भित्र प्रयोगकर्ताले तपाईं को हो, तपाईंको मूल्य प्रस्ताव के हो, र अब के गर्ने भनेर हेर्न सक्षम हुनुपर्छ। EyeQuant पृष्ठ को डिजाईन अनुकूलन को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी सुनिश्चित गरीन्छ।
यहाँ हाम्रो आईकिय्याकन्ट डेमोको नि: शुल्क परिणामहरू छन् ... मँ धेरै खुसी छु जहाँ ध्यान हाम्रो गृह पृष्ठमा राखिएको छ!
के अन्य सेवाहरुबाट आईक्वान्टलाई अलग गर्दछ भन्ने तथ्य यो हो कि यसले परिणामहरू प्राप्त गर्न केहि मिनेटहरू लिन्छ। परिणामहरू3बिभिन्न नक्साहरूमा पनि आउँदछन्।
यो ध्यान नक्शा तपाईको स्क्रिनशटको कुन क्षेत्रले क्रमशः अधिकतम, मध्यम वा कमसेकम ध्यान पुर्‍याउँछ भनेर देखाउँदछ। विशेष गरी आँखा लिने क्षेत्रहरू धनी रातोमा रंगीएको छ, औसत क्षेत्रहरू पहेंलो चिन्ह लगाइएको छ, तपाईंको स्क्रिनशटको कमजोर क्षेत्रहरू हरियो देखि निलोमा देखा पर्नेछ। पारदर्शी क्षेत्रहरूमा कुनै ध्यान दिईन्दैन।
यो धारणा नक्शा तपाईंको वेब पृष्ठको ध्यान केन्द्रितको द्रुत सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ: यसले एक नजरमा देखाउँदछ जुन प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको भ्रमणको पहिलो seconds सेकेन्डमा महसुस गर्नेछन्। उच्चतम दृश्य एक्युटी र स्क्रिनबाट औसत दूरीको गणनाको आधारमा, धारणा नक्शाको पारदर्शी क्षेत्रहरू जुन तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले यस महत्त्वपूर्ण अभिमुखिक चरणमा देख्दछन्।
यो चासो क्षेत्र सुविधा EyeQuant को सबै विस्तृत परिणाम प्रदान गर्दछ। यसले तपाइँलाई तपाइँको स्क्रिनशटमा १० क्षेत्र परिभाषित गर्न सक्षम गर्दछ, जसका लागि आईक्वान्टले एक प्रतिशत मान गणना गर्दछ, जस्तै + 10 45% वा -२23%। मानले संकेत गर्दछ कि कति अधिक क्षेत्र (वा कम) ठूलो छ स्क्रिनसटको औसतसँग तुलना गरिएको छ।
सेवाको लागत राम्रो छ, $ १ $$ / mo US or वा or5$ for 199 को लागि for० विश्लेषणको साथ। त्यहाँ इन्टरप्राइज मूल्य निर्धारण पनि उपलब्ध छ र इन्टरफेस दुबै जर्मन र अंग्रेजीमा उपलब्ध छ। EyeQuant पनि एक छ एपीआई र रिसेलर प्याकेज उपलब्ध छ!
टैग: ध्यान म्यापिंगहीटम्यापहीटमैपिंगधारणा म्यापि
मई 15, 2012 मा 6: 30 PM
EyeQuant यहाँ सह-संस्थापक। डगलसलाई चिच्याउनुभएकोमा धन्यवाद! यो केवल सुरुवात हो र EyeQuant सँग २०१२ को लागि पाइपमा *धेरै* साँच्चिकै राम्रो सामानहरू छन्। यदि तपाईं वा तपाईंका कुनै पाठकहरूसँग कुनै प्रश्न वा प्रतिक्रिया छ भने, म फेबियन मार्फत eyequant dot com मा तपाईंबाट सुन्न चाहन्छु।